धरानमा तेस्रो बहुभाषिक कविता गोष्ठी सम्पन्न, २४ कविता मध्येबाट १० उत्कृष्ट पुरस्कृत
धरानमा तेस्रो बहुभाषिक कविता गोष्ठी सम्पन्न, २४ कविता मध्येबाट १० उत्कृष्ट पुरस्कृत मेयर राईले सम्झिए स्व. कवि विमल गुरुङलाई
धरान : धरानमा बिहीबार आदिवासी जनजाति कवि कवयित्रीहरूले आफ्नो मातृ भाषामा कविता वाचन गरे ।
राज्यबाट उपेक्षित विभिन्न जातजातिको भाषामा जनजाति कविहरूले आफ्नो मातृभाषामा मौलिक संस्कार, संस्कृति, माया प्रेम र समसामयिक विषय बस्तुमा केन्द्रित रहेर कविता वाचन गरेका थिए ।
धरान ८ को धरान सभागृहको धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हलमा राई, लिम्बु, नेवा, तामाङ, याक्खा, सिङ्सावा लगायतका कवि कवयित्रीहरूले आफ्नो मौलिक भाषामा कविता वाचन गरेका थिए ।
प्रा.डा. टंक न्यौपाने, कवि बम देवान र कवि तथा पत्रकार प्रदीप मेन्याङबो निर्णायक रहेको तेस्रो बहुभाषिक कविता गोष्ठीको धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र धरान उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।
कविता गोष्ठीमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषामा २४ वटा कविता प्राप्त भएको थियो । प्राप्त कविता मध्ये २० जना कवि कवयित्रीहरूले आ-आफ्नो भाषामा कविता वाचन गरेका थिए । जस मध्ये १० वटा कवितालाई टप टेनमा निर्णायकले छनौट गरेका थिए ।
टपटेनमा मनि राई गोठाले-मेवाहाङ, इन्द्र योञ्जन-तामाङ, बमप्रकाश राई-चाम्लिङ, सेम्माङ याक्खा-याक्खा, प्रदीप योङया-लिम्बु, मिलन चाम्लिङ-चाम्लिङ, अमृत राई-वम्वुले, सोमा लिम्वुखिम-याक्खा, निमा पोङ्सुवा-सिङसावा र पानस गुरुङ-गुरुङ भाषाका दश कविता पर्न सफल भएका थिए । टप टेनमा पर्न सफल १० जना कवि कवयित्रीहरूलाई जनही ५ हजार नगद र प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरिएको थियो ।
कविता गोष्ठीको उद्घाटन धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्राज्ञ सुभचन्द्र राईले गरेका थिए । कविता गोष्ठीमा अप्रतियोगी विभिन्न कवि कवयित्रीहरूले आ आफ्नो कविता, गजल प्रस्तुत गरेका थिए ।
मेयर राईले सम्झिए स्व. कवि विमल गुरुङलाई
धरानका मेयर तिलक राईले स्वर्गीय कवि विमल गुरुङलाई सम्झँदै गुरुङको ‘आमा ब्रुनाईबाट आएपछि’ भन्ने कविता वाचन गरेर सुनाएका थिए ।
बिहीबार धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बहुभाषिक कविता गोष्ठीमा मेयर राईले स्व. कवि गुरुङको कविता वाचन गरेर सुनाएका हुन् । मेयर राईले आफ्नो समकालीन साथी स्व.गुरुङ र कविताको बारेमा प्रशंसा समेत गरे । ‘राज्यले गर्न नसकेको काम हो भन्छु म, हामी कुन कुन समयमा? को को लाई के के लाग्यो ?
हामी गएर जोड्यौ त्यहाँ, समितिमा बस्यौ पनि हामी त्यहाँ, तर, त्यो भावना नबुझेर होला, त्यो पुस्तकालयमा धेरै मान्छे अडिन सक्नु भा छैन, भावना बुझ्नुपर्छ भन्छु म । आए फलैँचामा बसे जस्तो साथीहरू केही वर्ष बसे गइदिए, पुस्तकालयलाई फरक ढङ्गबाट चलाउनु पर्छ की भन्ने लाग्छ मलाई, त्यो पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु’ मेयर राईले भने ।
धरान कला, साहित्य, रङ्गकर्म र खेलकुदमा अत्यन्तै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको ठाउँ भएको पनि मेयर राईले बताए । मेयर राईले धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई फलाउने फुलाउने प्रक्रियामा अगाडी बढिरहेको बताए ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको क्रियाशीलताले अब धरानमा थप राम्रो गतिविधिहरू गर्दै जानेमा आफूले विश्वास लिएको बताए । फरक धारमा, फरक हिसाबमा, जुन पहिचानको मुद्दा बोकिरहेको छ, यसलाई पनि आत्मसाथ गरेर कला, साहित्यलाई भाषासँग जोडेर, पहिचानसँग जोडेर बहुभाषिक कविता गोष्ठी भएको भन्दै मेयर राईले प्रशंसा समेत गरे ।